Izindlu zangasese ezibheda kakhulu | Scrolla Izindaba
Izindlu zangasese ezibheda kakhulu
Abazali nabafundi baseCeza Primary School Olundi, eChibini bashaqekile ngesimo sezindlu zangasese “ezingafanele ngisho nokubizwa ngezindlu zangasese”.
Bathi lesi sikole, esinamagumbi okufundela anezindonga eziwayo, asisondele nhlobo nokuhlangana nemithetho ye-Covid-19 yokuhlanzeka kanye nokuqhelelana.
Banethemba lokuthi enye ingxenye yemali yesibonelelo se-Covid-19 emenyezelwe nguMengameli uCyril Ramaphosa izolungisa isakhiwo sesikole.
Okuhamba phambili, izindlu zangasese ezihloniphekile.
Isikole iCeza Primary singezinye sezikole ezinezindlu zangasese ezimbi kakhulu ohlelweni lokufunda ezweni.
Izindlu zangasese zemgodi ezenzelwe othisha nabafundi azinayo iminyango, azinazo izihlalo zangasese, azinawo amanzi futhi azinazo izindlela zokuhlanzeka zanoma iluphi uhlobo.
“Kuyihlazo futhi kuyalimaza, ikakhulukazi ukuthi othisha babonwa beya ezindlini zangasese ezingelutho kodwa imgodi kuphela. Azilungele ngisho nokubizwa ngamathoyilethi omgodi. Mabi kakhulu kunalokho,” kusho iKhansela leWadi yesi-4 uManyomfana Masondo.
UMasondo uthi imigodi enukayo ishiye umphakathi nethimba elilawula isikole lithukuthele. Uthi isikole siqala kumazinga aphansi u-Grade R size sifike ebangeni lesi-7. “Sinenkinga yezindlu zangasese ezingekho esimeni esihle. Izingane zethu zizogula. Ngisho namagumbi okufundela adilika izindonga, ngoba kusengamagumbi afanayo naphambilini ayesetshenziswa ugogo ngenkathi efunda kuleso sikole emashumini eminyaka edlule. ”
UMasondo uthi sebehambise izikhalazo zabo kaningi eMnyangweni Wezemfundo esifundazweni, kepha akukho okusenzekile.
“Abazali bebengifonela bethi abazi ukuthi kufanele benzeni. Basaba ukuthi izingane zabo zizogula kuleso sikole, ”kusho uMasondo.
Kuthintwe uMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal ukuze benze isitatimende mayelana nalolu daba, kodwa bathi basafuna izimpendulo.
Sicela usithinte [email protected] uma ucabanga ukuthi kunezinye izikole ezinenkinga ukudlula lesi eNingizimu Afrika – noma usitshele uma uziqhenya ngesikole sendawo yangakini.